Nolosha Magaalada Malmö | Somaliska
Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden. Magaalada Malmö waa tan sadexaad ee ugu wayn dalka Sweden ayadoo ah xarunta kobalka Skåne, waxayna daris la tahay Magaalada Kobenhagen ee caasimada Denmark. Magaalada waxaa ku nool dadka aad u fara badan oo ajanabi ah qaasatan Muslimiinta, ayadoo Soomaaliduna ay ku badan yihiin. Guryaha Helitaanka guryaha ee magaalada Malmö waa mid aad u adag. Dadka ajanabiga sida carabta, Soomaalida iyo afgaanida ayaa aad ugu soo badanayay beryihii dambe. Soomaalida magaalada ku nool ayaa inta badan degan xaafada Rosengård oo ay aad isku dul saaran yihiin. Dhibaatada guryaha ayaa qaasan haysata dadka ku cusub magaalada. Kirada guryaha ayaa ku xiran xaafada iyo inta qol ee qofku rabo ayadoo guriga 2da qol ah lagu qiyaasi karo 4000 ilaa 5000 kr. halka guryaha 4ta ilaa 6da qol ay ku kici karaan 7000 ilaa 10,000kr. Kharashka guryaha ayaa dadka waxaa ka bixiya cayrta ama kamuunka. Waxbarashada: qaasatan luuqada (SFI) Magaladan Malmö dadka ajaanibta ah gaar ahaan kuweena Soomaaliyeed aad ayay oogu adagthay in ay halsano ku dhameeyaan SFIga maxaa yeelay luqada oo aad u adag daraadeed iyo dadka ajaaniibta ah oo meel la iskugu geeyay taas ayaan keenaysa in ay ku adkaato. Qaybaha SFIgu waxaa uu uqaybsamaa 4 qaybood SFI A,B,C,D. Waxaa aad iyo aad loo adkeeyay qaybaha C iyo D oo ah lama dhaafan ku noqotay dadka ajaaniibta ah 65%. Dadka SFIga dhigto waxaa u dheer intaas aan soo sheegay in haddi ay dhameeyaan SFI waxaa u taala shaqo aad u adag si ay u tagan dugsiga sare ama Gymnasiet ka dib markaas waxaa u dheer oo looga bahaanyahay Matte/xisaab iyo english iyo Svenska oo fasalka 9aad ee grundskolanka/dugsiga dhexe. Kadib markii ay qaybahas aan soo sheegay ay dhmeeyaan ayay aadi karaan dugsiga sare/Gymnasiet. Dadka soomaalida ah marka qaybahaas aan soo sheegay waa ay ku adagtahay inkastoo ay jiraan 50% ay 2 sano kadib aadaan dugsiga sare maxaana yeelay dadaalkooda ayaa gaarsiyay- Dadka qaarkiis oo dagan magaaladda Malmö ahna soomalida SFI gu waxaa ay u arkaan takoornimo maxaa yeelay waxaa ay ku doodaayan in ardayga hadi la la fadhiisiyo swedishka ay u fududaan lahayd luqada si bulshada dhaqso oo la qabsado SFIgu saacadaha la aado waa saacadaha iskuulada la aado unbuu la mid yahay. Shaqada iyo Baraaktiiga Dadka soomaalida ah inta badan ma shaqeeyaan oo waxaa badalkeeda loo diraa Praktik ama Skuuladda saacadahana waxaa ay ku xirantahay kolba qofka meesha uu praktiga ku sameeyo. Praktiga dadka waxaa ay ku sameeyaan sida Xanaanada dadka waawayn ama nadaafadda , iwm. Lakin waxaa jiro dad ayagana loo diray iskuulada si ay u bartaan luqada. Dadka praktiga ka dib shaqo ma helaan inta badan maxaa eelay shaqada ayaa aad u yar magaaladaan Malmö. Soomaali shaqaysata ayaa jirta waxaa ayna ka shaqeeyaan basaska, Nadaafadda, Turjubidda iwm. Nolasha Guud Magaalada dad muslimiin ah oo aad u badan ayaa dagan xaga cuntada xalaasha ahna waa ay ka ciil baxeen. Kharashka ay qaataan dadyowga ceydha qaato ee ku dhaqan magaalada Malmö waakan waa dadyowga familka ah waxaa ay qaatan walidiinta 2500kr midkiiba halka dhalaanku aya qaatan 2700 kr bishii. qofka kaligii dagan asaga waxaa uu qaata ilaa 4500kr oo gurigana laga bixinaayo. Dhinaca maciishada ee magaaladan Malmö aad iyo aad ay u wanaagsantahay waana raqiis ayaan u malaynyaa. dadka waa ay ku ladanyihiin magaaladan Malmö. Gaadiidka iyo Isku socodka Magaalada. Malmö waxaa ka shaqeeyo basas iyo tareemanba xitaa diyaaradaha waa ay ka duulaan marka maalmö gudaheeda waxaa ka shaqeeyo basas cagaar ah basas ka baxana waa ay jiraan oo aado magaalooyinka ku dhadhaw ee gobolka Skåne ah, tareemada aad ayay u kala socdaan waxaan la dhamaystiri rabaa mid dhulka hoostiisa oo laga dhisaayo waddo tareen iyo stationka tareenka oo aad loo casriyeeyay lana dhamaystiraayo december 2010 inshalah. Waxaan mahad gaara u diraynaa Maxamud Maxamed oo ka mid bulshad adegan magaalada Malmo ee noo soo diyaariyay warbixintaan qiimaha badan. Fadlan adiguna noo soo dir warbixin tan la mid ah oo ku saabsan kamuunkaaga.
Nolosha Magaalada Malmö
Warbixintani waa mid ka mid ah barnaamijkii aan ugu tala galnay in aan kaga warano nolosha kamuunada Sweden.
Magaalada Malmö waa tan sadexaad ee ugu wayn dalka Sweden ayadoo ah xarunta kobalka Skåne, waxayna daris la tahay Magaalada Kobenhagen ee caasimada Denmark. Magaalada waxaa ku nool dadka aad u fara badan oo ajanabi ah qaasatan Muslimiinta, ayadoo Soomaaliduna ay ku badan yihiin.
Helitaanka guryaha ee magaalada Malmö waa mid aad u adag. Dadka ajanabiga sida carabta, Soomaalida iyo afgaanida ayaa aad ugu soo badanayay beryihii dambe. Soomaalida magaalada ku nool ayaa inta badan degan xaafada Rosengård oo ay aad isku dul saaran yihiin.
Dhibaatada guryaha ayaa qaasan haysata dadka ku cusub magaalada. Kirada guryaha ayaa ku xiran xaafada iyo inta qol ee qofku rabo ayadoo guriga 2da qol ah lagu qiyaasi karo 4000 ilaa 5000 kr. halka guryaha 4ta ilaa 6da qol ay ku kici karaan 7000 ilaa 10,000kr.
Kharashka guryaha ayaa dadka waxaa ka bixiya cayrta ama kamuunka.
Waxbarashada: qaasatan luuqada (SFI)
Magaladan Malmö dadka ajaanibta ah gaar ahaan kuweena Soomaaliyeed aad ayay oogu adagthay in ay halsano ku dhameeyaan SFIga maxaa yeelay luqada oo aad u adag daraadeed iyo dadka ajaaniibta ah oo meel la iskugu geeyay taas ayaan keenaysa in ay ku adkaato.
Qaybaha SFIgu waxaa uu uqaybsamaa 4 qaybood SFI A,B,C,D.
Waxaa aad iyo aad loo adkeeyay qaybaha C iyo D oo ah lama dhaafan ku noqotay dadka ajaaniibta ah 65%.
Dadka SFIga dhigto waxaa u dheer intaas aan soo sheegay in haddi ay dhameeyaan SFI waxaa u taala shaqo aad u adag si ay u tagan dugsiga sare ama Gymnasiet ka dib markaas waxaa u dheer oo looga bahaanyahay Matte/xisaab iyo english iyo Svenska oo fasalka 9aad ee grundskolanka/dugsiga dhexe.
Kadib markii ay qaybahas aan soo sheegay ay dhmeeyaan ayay aadi karaan dugsiga sare/Gymnasiet. Dadka soomaalida ah marka qaybahaas aan soo sheegay waa ay ku adagtahay inkastoo ay jiraan 50% ay 2 sano kadib aadaan dugsiga sare maxaana yeelay dadaalkooda ayaa gaarsiyay-
Dadka qaarkiis oo dagan magaaladda Malmö ahna soomalida SFI gu waxaa ay u arkaan takoornimo maxaa yeelay waxaa ay ku doodaayan in ardayga hadi la la fadhiisiyo swedishka ay u fududaan lahayd luqada si bulshada dhaqso oo la qabsado SFIgu saacadaha la aado waa saacadaha iskuulada la aado unbuu la mid yahay.
Shaqada iyo Baraaktiiga
Dadka soomaalida ah inta badan ma shaqeeyaan oo waxaa badalkeeda loo diraa Praktik ama Skuuladda saacadahana waxaa ay ku xirantahay kolba qofka meesha uu praktiga ku sameeyo.
Praktiga dadka waxaa ay ku sameeyaan sida Xanaanada dadka waawayn ama nadaafadda , iwm. Lakin waxaa jiro dad ayagana loo diray iskuulada si ay u bartaan luqada.
Dadka praktiga ka dib shaqo ma helaan inta badan maxaa eelay shaqada ayaa aad u yar magaaladaan Malmö. Soomaali shaqaysata ayaa jirta waxaa ayna ka shaqeeyaan basaska, Nadaafadda, Turjubidda iwm.
Magaalada dad muslimiin ah oo aad u badan ayaa dagan xaga cuntada xalaasha ahna waa ay ka ciil baxeen.
Kharashka ay qaataan dadyowga ceydha qaato ee ku dhaqan magaalada Malmö waakan waa dadyowga familka ah waxaa ay qaatan walidiinta 2500kr midkiiba halka dhalaanku aya qaatan 2700 kr bishii.
qofka kaligii dagan asaga waxaa uu qaata ilaa 4500kr oo gurigana laga bixinaayo. Dhinaca maciishada ee magaaladan Malmö aad iyo aad ay u wanaagsantahay waana raqiis ayaan u malaynyaa. dadka waa ay ku ladanyihiin magaaladan Malmö.
Gaadiidka iyo Isku socodka Magaalada.
Malmö waxaa ka shaqeeyo basas iyo tareemanba xitaa diyaaradaha waa ay ka duulaan marka maalmö gudaheeda waxaa ka shaqeeyo basas cagaar ah basas ka baxana waa ay jiraan oo aado magaalooyinka ku dhadhaw ee gobolka Skåne ah, tareemada aad ayay u kala socdaan waxaan la dhamaystiri rabaa mid dhulka hoostiisa oo laga dhisaayo waddo tareen iyo stationka tareenka oo aad loo casriyeeyay lana dhamaystiraayo december 2010 inshalah.
Waxaan mahad gaara u diraynaa Maxamud Maxamed oo ka mid bulshad adegan magaalada Malmo ee noo soo diyaariyay warbixintaan qiimaha badan.
Fadlan adiguna noo soo dir warbixin tan la mid ah oo ku saabsan kamuunkaaga.
Dadyowga loo diiday sharciyadda oo dib loogu celin doono dalalkoodii kadib weerarkii Stockholm ka dhacay
Magaaladda Västerås: Taliye ciidan oo xalay gurigiisa kooxo weerareen
Caruurta Soomaaliyeed iyo dabaaldegga 1-da luuliyo